သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> Frozen ထားသော TEMPURA -> ထားသော TEMPURA
Champion Refrigerant Food Co., Ltd. ကိုထုတ်လုပ်ထားပြီး ထားသော TEMPURA2ဆယ်စုနှစ်ဘို့နှင့်ငါတို့ထားသော TEMPURA အဓိကစားသောက်ကုန်လက်လီအရောင်းကုမ္ပဏီများမှာရောင်း Taiwan။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထားသော TEMPURA ဖောက်သည်များကမျက်နှာသာသိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်အသုံးပြုနိုင်သည်လူအပေါင်းတို့သည်ကုန်ကြမ်းပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်. အလေးအနက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ texture အမြဲစျေးကွက်အပေါ်သူတို့အားစျေးပေါထုတ်ကုန်များထံမှထွက်ရပ်နေ၏။ သငျသညျအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရှာကြသည်, သင်မှကြိုဆိုပါတယ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။ # ထိုင်ဝမ်ပူပြင်းတဲ့အိုးတလုံးစားနပ်ရိက္ခာဆန်တင်ပို့သူများ # ထိုင်ဝမ်ပူပြင်းတဲ့အိုးတလုံးကိုအထူးပြုစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူ # ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်ထောက်ပံ့ရေးအရည်အသွေးမြင့်မားပူပြင်းတဲ့အိုးတလုံးကိုအစာအာဟာရ
ထင်မြင်ချက်အမွှေးအကြိုင်နှင့်ပြည့်စုံလျက်, springy texture ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုကုန်ကြမ်းပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်. အလေးအနက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထှကျ line ကို HACCP နှင့် ISO22000 အားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူဘေးကင်းလုံခြုံသင်ထုတ်ကုန်များအာမခံပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားပူပြင်းတဲ့အိုးကစားနပ်ရိက္ခာ # ထိုင်ဝမ်အရည်အသွေးသည်ပူပြင်းသောအိုးစားနပ်ရိက္ခာစက်ရုံတွင် # ကွိုဆိုလက္ကားအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်၏ # ဆက်စပ်ပစ္စည်း